UEFA Oo Ogolaatay In Khamriga Lagu Dhex Cabbo Garoomada | Wardoon Wardoon.net - Somali News
UEFA Oo Ogolaatay In Khamriga Lagu Dhex Cabbo Garoomada
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa go’aamiyey in tartamada Yurub ee Champions League iyo Europa League lagu dhex cabbo maandooriyeyaasha xili ciyaareedka 2018-19 ee dhowaanta bilaabmi doonta, go’aankaas oo uu si diirran usoo dhoweeyey Ururka taageereyaasha kubadda cagta Yurub ee FSE.
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ayaa isbeddel ku sameeyey sharcigii xaaraantimayeynayey in maandooriyeyaasha Alcohol-ka lagu iibiyo ama qaybiyo ciyaaraha dhexdooda, waxaana hadda wixii ka dambeeya ay taageereyaasha xor u noqon doonaan inay ku dhex cabbi karaan sida uu ogolaanayo sharciga cusub.
Sharcigan ayaan saamayn doonin ciyaaraha ka dhacaya waddanka Ingiriiska, hase yeeshee waxay jamaahiirtu awood u yeelan doonaan inay cabbitaankooda la tagaan meel cayiman oo garoonka gudihiisa ah, isla markaana aanay kuraas oollin.
War-saxaafadeed ay gellinkii hore ee Salaasada soo saareen ururka taageereyaasha kubadda cagta Yurub ee FSE ayaa waxay ku sheegeen inay soo dhoweynayaan go’aanka UEFA.
Ronan Evain oo ah guddoomiyaha FSE ayaa waxa uu war-saxaafadeedkiisa ku sheegay in taageereyaasha kubadda cagta si caddaalad darro ah loola dhaqmo marka la barbar dhigo taageereyaasha kale ee ciyaaraha kale sida Rugby-da.
FSE waxa kale oo ay sheegeen in jamaahiirta doonaya inay khamriga cabbaan ay tahay inay xilli hore garoonka yimaaddaan oo ay hawshooda sii dhamaystaan si aanay garoonka buuq iyo cidhiidhi uga abuurin.
Qodobka 36aad ee sharciga UEFA oo ka hadla xakamaynta ama sugidda ammaanka garoonka ayaa mabnuucayey in garoonka lala soo galo maandooriyeyaasha.